Shuruudaha iyo xaaladaha dhigeeysa bonus Starburst |
Shuruudaha iyo xaaladaha dhigeeysa bonus Starburst
Starburst bonus dhigeeysa Shuruudaha iyo Xaaladaha:
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon u dhexeeya 00.01 Thursday 12-kii May iyo 23.59 Wednesday 18 May 2016 (GMT).
Si aad xaq u leedahay gunada ah, ciyaaryahano waa in lagu aamino oo sharad muddada xayaysiis.
Haddii kayd ciyaaryahanka ilaa £ 50 in mudada xayaysiinta ay heli doonaan 10 free dhigeeysa inuu u ciyaaro on Starburst. Haddii kayd ciyaaryahan ee u dhexeeya £ 50,01 iyo £ 100 ka dibna waxay heli doontaa 50 dhigeeysa free. Haddii kayd ciyaaryahan ka badan £ 100,01 ee muddada dhiirrigelin markaas waxay heli doontaa 100 dhigeeysa free. Dhigeeysa waxay noqon doontaa qiimo 10p.
Ciyaartoyda mid kastaa wuxuu heli doonaa ugu badnaan 100 dhigeeysa free on Starburst
Guuleystayna ka dhigeeysa ku kasbaday qaadi doonaa shuruudda wagering ah 30x wadarta lacagta gunnada ah kasbadeen
wagering uun kulan kuwan: Starburst, Gonzo ee Quest, Twin miiqdaan, Spinata Grande, Pyramid, taajirnimo lacagta, South Park, Jack Hammer, Hooks Heroes, Me la yaabtid, iyakana Stax, Dracula, Jack iyo Beanstalk The, Xulka, Rush Reel, Lights, Diskoo dhigeeysa, Koi Princess, Mythic xaasnimada, Sparks, Warqadaha, Magic portals, blackjack Classic, Shop Fruit, ubax, uumi Tower, Fisticuffs, Angler Lucky, Tornado Farm cararidda, Subtopia, Jack Hammer 2, Big Bang, Man Invisible, South Park 2 Reel fowdo, King boosaska, Shisheeyaha, siyasad, Qoryaha N GUUSHII, Master of maqan, Drive tirin doonaa dhinaca hoos ee looga baahan yahay wagering ah.
lacag Bonus si toos ah loogu badalo mar wagering waa dhameystiran
Marka lagu tiriyaa aad gunno weli aan dhicin, waayo, 7 maalmood. Miyaanay ahayn in aad buuxiso shuruudaha wagering in muddo this ee, hartay lacag gunno dhiirrigelinta this laga saari doonaa xisaabtaada.
Ciyaartoyda waxaa la xusuusiyey in kaliya hal bonus FreeSpin noqon kartaa firfircoon ee wakhti kasta, fadlan tag “my account” qaybta si aad u aragto oo dhan safka bonus
Shuruudaha iyo bes-Deposit iyo Hel 25 dhigeeysa
Shuruudaha Oo Xaaladda – Gonzo’s Quest for Love –…
Shuruudaha Oo Xaaladda – 100% match up to £100 +…
Shuruudaha Oo Xaalad Waayo, ayna miiqdaan Bonus Thursday
Shuruudaha iyo Xaaladaha of dhigeeysa AMAAL GONZO
Shuruudaha iyo Xaaladaha of dhigeeysa Bonus Daily